သူကြီးအလှူ နောက်ဆက်တွဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » သူကြီးအလှူ နောက်ဆက်တွဲ…
Posted by ေခတ္သစ္ေပါက္က်ဳိင္း on Aug 14, 2011 in Food, Drink & Recipes | 10 comments
White TomYam (or) Clear TomYam whit Seafood
ချက်ပြုတ်ပုံအဆင်ုဆင့်။ ။ ပုဇွန်အစိမ်းကို အခွံခွါထားပါ၊ပြည်ကြီးငါးကို အနေတော်လေးတွေလှီးထားပါ၊ငါးကိုအသားကြီးပဲလွှာပီးပါးပါးလှီးပါ။ငါးဖယ်ကကြော်ပီးသား ရယ်ဒီမိတ်လည်းရပါတယ်၊ပါးပါးလှီးထားပါ၊စပါးလင်ကို လက်နှစ်သစ်အရွယ်လောက်ဖြတ်ပါ၊ရှောက်နှစ်ရွက်သုံးရွက်ကိုရေဆေးထာပါ၊ငရုတ်သီးစိမ်းခြောက်တောင့်လောက်ကို ပါးပါးလှီးလိုက်ပါ၊နံနံပင်အနည်းငယ်ကို နုတ်နုတ်စင်းထားပါ၊သံပုရာရည်ကို ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့်ရအောင် အရည်ညစ်ထားပါ။
အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် ဟင်းချိုပုဂံလုံးတစ်လုံးစာခန့်ရေကို အိုးထဲ့ထည့်၍မီးဖွင့်ထားပါ၊ဆူလာလျှင် မီးလျှော့ထားပီး အသင့်ပြင်ထားသောပုဇွန်အစိမ်း၊
ပြည်ကြီးငါးအစိမ်း စသည်တို့ကိုထည့်ပါ။စပါးလင်လက်နှစ်အရွယ်ခန့်နှစ်ချောင်းကို ဓါးပြားရိုက်ပီးထည့်ပါ၊ပဒဲဂေါ တစ်ပြားလောက်လှီးပီးထည့်ပါ၊ရှောက်ရွက်ထည့်ပါ၊ငရုတ်သီးစိမ်း၊နံနံပင်ငားလုံးထည့်ပါ၊ဆားအနည်းငယ်၊သကြားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ငါးငံပြာရည်၊
လက်ရည်ဇွန်းနှင့်တစ်ဇွန်း၊သံပုရာရည့်ပါ။အပေါ့အငံ ကမိမိနှစ်သက်သလိုထည့်၍သုံးဆောင်နှိင်ပါသည်။ချဉ်စပ်ကလေးဖြစ်၍ မြန်မာလူမျိုးလည်းနှစ်သက်ပါသည်။ရခိုင် မုန့်တီနှင့်လည်းအရသာစင်ပါသည်။
တုံယမ် ဟင်းချိုကြိုက်တယ်.. ထိုင်းက လာတဲ့ ရယ်ဒီမိတ် အထုတ်ကို ဝယ်ချက်တာ.. သိပ်စားမကောင်းဘူး အရင်ကတော့ နူဒယ်ဟောက်စ် (ဘုန်းကြီးလမ်း) အဲဒီမှာ စားတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ
တုံယမ်း ဟင်းချိုဆို Mai Thai နဲ့ Sabai Sabai မှာ အရမ်းကောင်းတယ် … ။ ရှာပါမကဘူး .. မျက်စိပါ ကျွတ်ထွက်မတတ် ချဉ်စပ် အရသာ ရှိတယ် ဟီးဟီး ။
စားချင်စရာလေး… ဗိုုက် တောင်ဆာလာတယ်…
ဟင်းလျာ နာမည်လေးက ဘာလေးတဲ့လဲဗျာ….
တုံယမ် ဟင်းပါ ကိုGipsy ဝင်ရောက်ဖြေပေးလိုက်တယ် မှားရင်ပြင်ပေးပေါ့ ကိုဇော်မင်း……….
အလကား လာမစားပါဘူးဗျာ မကြောက်ပါနဲ့ ( သာဒ မလေး )
အကိုက ယိုးဒယားအစားအစာတွေ တင်ပြီး နာစီဂိုးဒင်းတွေရော မီဂိုးဒင်း တွေရောဆိုတော့ အာဆီယံ ချစ်ကြည်ရေးဆိုင်ထင်တယ်နော် .. နောက်ပြီး ဘာညာ ဘာညာ လဲရသေး ……………..
စားချင်စရာကြီးနော် —အိမ်မှာ မေမေ ကိုချက်ခိုင်းရမယ်။ ကြံမဆိုင်ကိုပို ကြိုက်တယ်။ဒါလဲ မဆိုးပါဘူး အိမ်မှာဝိုင်းချက်စားကြမယ်။ရွာ သားရွာသူတွေတော့ မဖိတ်တော့ဘူး (ကပ်စေးနဲလို ့)ဟိ ဟိ
ဥပုသ်စောင့်ထားတဲ့အချိန် အစားအစာအကြောင်းဖတ်လိုက်မိတယ် .. ဒုက္ခပဲ .. ဗိုက်ဆာလာပြီ
ဘီယာဆိုင် သို ့ချီတက်ခါနီး
ဒီပုံလေးကို မျက်လုံးထဲ စွဲနေအောင် မှတ်သွားပြီး
စိတ်ကူး နဲ ့
ဘီယာ တစ်ကျိုက် ဖြစ်တော့မှာ
အသေအချာ ပဲ ဗျို ့
တုံယမ်ဖြူဟင်းချိုပါ၊ များသောအားဖြင့် တုံယမ်ကို တုံယမ်အနှစ်နှင့်ချက်သော အနီရောင်တုံယမ်ကို လူသိများပါတယ်၊တုံယမ်အဖြူမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်၊တစ်ခုက အုန်းနို့ထည့်ပြီးချက်ပါတယ်၊ပုံမှာက တုံယမ်ဖြူ(clear Tomyam)ပါ။ကိုတော်ကာရေ…အားလူးချောင်းကြော်နဲ့တုံယမ်းဖြူလေးနဲ့ မြန်မာစည်လေးနဲ့အိုကေမှာစိုပြေပါစေဗျာ…
မိတ်တွေနဲ့ ယိုးဒယားဆိုင် မြန်မာဆိုင် သွားစားရင် တုံယမ် (အနီ)ရယ် သင်္ဘောသီးထောင်းရယ်က မပါမဖြစ်ပဲ။ ကိုယ်က ငြီးငွေ့လို့ အခြားဟင်းချိုနဲ့ အသုပ်တခုခုပြောင်းမှာချင်လည်း သူတို့က တခါလာလည်း ဒါပဲ၊ နောက်တခါလာလည်း ဒါပဲ။ အခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့ သွားရင်လည်း ဒီလိုပဲ။ ယိုးဒယားဆိုင်ရောက်ရင် အဲဒီဟင်းနှစ်မျိုး အမြဲပါရမယ် မှတ်နေကြလားမသိဘူး။ စိတ်ပိန်ဒယ်…
ကိုကြောင်ကြီးရေ..ချဉ်ငံစပ် ဆိုရင်မြန်မာတွေကအကြိုက်ပဲလေ…တုံယမ်နဲ့ သဘောင်္သီးထောင်း(စွန်တန်)က ဗာမာပါးစပ်နဲ့တည့်တယ်လေ…သူကြီးတို့လို ကိုဘေး ဘီးစတစ်ကြိုက်သူတွေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ…